Meanings of သ သ သ သကဒါဂါမ် သကရာဇ် သကာ သကာလ သကိုး သကဲ့သို့ သက္ကတ သက္ကဒါန် သက္ကရာဇ် သက္ကရာဇ် သက္ကရာဇ်တက် သက္ကရာဇ်တို သက္ကရာဇ်ဖြို သက္ကရာဇ်ရှည် သက္ကလတ် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ သက်
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / သ
"သ" to "သက်"
သ, သ, သ, သကဒါဂါမ်, သကရာဇ်, သကာ, သကာလ, သကိုး, သကဲ့သို့, သက္ကတ, သက္ကဒါန်, သက္ကရာဇ်, သက္ကရာဇ်, သက္ကရာဇ်တက်, သက္ကရာဇ်တို, သက္ကရာဇ်ဖြို, သက္ကရာဇ်ရှည်, သက္ကလတ်, သက္ကာယဒိဋ္ဌိ, သက်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
`သ`(အသံထွက်) (/tha/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) adjective forming particle သ သ(part) သော၊ သည်၊ သည့်၏ အတိုစကားလုံး။#: ရေတွင်နစ်သူကို။ ကဝိဒီ။ ၃၈၇။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) သ
အင်္ဂလိပ်/Englishthirtieth letter of the Myanmar alphabet.(part)particle suffixed to some verbs for euphonic effect.
အင်္ဂလိပ်/English1 make oneself presentable or good-looking. /2keep(sth)in trim or in shape. / sharpenaspear oraknife.
အင်္ဂလိပ်/Englishabbreviated form of the adjective forming particles.
`သကဒါဂါမ်`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱da gan/)(ရင်းမြစ်) Pali-သကဒါဂါမိ common noun သကဒါဂါမ် Pali-သကဒါဂါမိ - သကဒါဂါမ်(n) အရိယာလေးဆင့်တွင် ဒုတိယအဆင့်၌ တည်သောပုဂ္ဂိုလ်။ လူ့ဘုံသို့ တစ်ကြ
အင်္ဂလိပ်/Englishone who has attained the second of the four stages leading to ultimate sainthood and nirvana; one who has been reincarnated asahuman being for the last time.
`သကရာဇ်`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱jí/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐကရာဇ common noun သကရာဇ် Sans-ၐကရာဇ - သကရာဇ်(n) obsolete# မြန်မာတို့ မှတ်သားသုံးစွဲလာခဲ့သော နှစ်အရေအတွက်။#: ရာဇဝင်ခုနှစ်သကရာဇ်များ။ ကြ
`သကာ`(အသံထွက်) (/dha̱ga/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐင်္ကရာ common noun သကာ Sans-ၐင်္ကရာ - သကာ(n) ကြံရည်၊ ထန်းရည်စသည်တို့ကို ကျိုချက်ရာတွင် ခဲလုဆဲဆဲစေးပျစ်သည့် အရည်။#: (=အရေအတွက်=
`သကာလ`(အသံထွက်) (/tha̱ ka la./)(ရင်းမြစ်) Myan-‌ေသာ - သ+Pali-ကာလ(သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) conjuction linking sentences သကာလ Myan-‌ေသာ - သ(part)+Pali-ကာလ(n) သောအခါ။#: လက်ငင်းအခြေအနေကို သိပြီးသကာလ ပ
`သကိုး`(အသံထွက်) (/dha̱ gou:/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) indicating simultaneous action သကိုး သကိုး(part) colloquial# များသောအားဖြင့် ကတ္တား၏အမူအရာကို အသိအမှတ်ပြုသည့် သဘောနှင့်သုံးသော စကားလုံး။#: တယ်ခွကျ
အင်္ဂလိပ်/English[colloq] particle suffixed toaverb to emphasize what has been stated.
`သကဲ့သို့`(အသံထွက်) (/tha̱ ke. (dha̱ ge.) dhou./)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) comparative သကဲ့သို့ သကဲ့သို့(conj) ဝတ္တုနှစ်ခုတူညီသည်ကို ပြရာ၌ သုံးစွဲလေ့ရှိသော ဥပမာစကား။#: သူကြိုးစားသကဲ
အင်္ဂလိပ်/Englishin the semanner or to the sedegree or extent as; like; just as.
`သက္ကတ`(အသံထွက်) (/thé ka̱ ta./)(ရင်းမြစ်) Pali-သက္ကတ proper noun သက္ကတ Pali-သက္ကတ(n) သင်္သကရိုက်ဘာသာ။#: ဗြာဟ္မဏတို့သာသက္ကတဘာသာကိုတတ်ကျွမ်းကြ၏။ သမိုင်း၊ ပ။ ၁၄၆။(=အရေအတ
`သက္ကဒါန်`(အသံထွက်) (/thé ka̱dan/)(ရင်းမြစ်) Pali-သက္က+ဒါန common noun သက္ကဒါန် Pali-သက္က+ဒါန - သက္ကဒါန်(n) သက္ကဒါန်လှေတွင်ရှိသောအချွန်အတက်ကဲ့သို့အပြောက်အမွမ်း။#: တပ်ခင်းနှ
အင်္ဂလိပ်/English1 kind of royal barge said to have been presented by သိကြားမင်း originally. /2decorative motif derived from suchaboat.
`သက္ကရာဇ်`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱jí (thé ka̱jí)/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ common noun သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n) ြမန်မာတို့မှတ်သားသုံးစွဲလာခဲ့သောနှစ်အရေအတွက်။#: ရေတွက်သက္
အင်္ဂလိပ်/Englishthe present Myanmar Era [reckoned from the time Lord Buddha attained nirvana in BC; but which incorporates the ဒေါဒေါသရ and ခဆဉ္စ modifications which eliminated 22 and years respectively from it; so that in effect it can be said to have been reckoned from AD to the present]
အင်္ဂလိပ်/Englishthe present Myanmar Era(reckoned from the time Lord Buddha attained nirvana in BC; but which incorporates the ဒေါဒေါရသ and ခဆပဉ္စ modifications which eliminated 22 AD to the present).
`သက္ကရာဇ်တက်`(အသံထွက်) (/dhagají (thé kají) té/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ+Myan-တက် (my-verb) compound verb သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-တက်(v) obsolete# နှစ်ဆန်းသည်။ သက္ကရာဇ်သစ်သို့ဝင
အင်္ဂလိပ်/Englishnew year begins.
`သက္ကရာဇ်တို`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱jí (thé ka̱jí) tou/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ+Myan-တို compound noun သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-တို(adj) obsolete# သက္ကရာဇ် ၈၀၀ တွင် မိုးညှင
အင်္ဂလိပ်/English[obs] term for the Myanmar Era which takes into account King Mohnyin’s modification of eliminating years from the calendar in 1 AD; thus reckoning it from 1 AD [it was not popularly accepted and the term soon lapsed into obsolescence]
`သက္ကရာဇ်ဖြို`(အသံထွက်) (/dhagají (thé kají) hpjou/)(ရင်းမြစ်) ှSans-ၐက+ရာဇ+Myan-ဖြို (my-verb) causative verb ဖြို Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-ဖြို(v) obsolete# နှစ်အရေအတွက်များလာသောအခါထိ
အင်္ဂလိပ်/Englisherase the years of an era.
`သက္ကရာဇ်ရှည်`(အသံထွက်) (/dhagají (thé kají) shei/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ+Myan-ရှည် compound noun သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-ရှည်(adj) obsolete# ပုပ္ပားစောရဟန်းမင်းနှစ်ပ
အင်္ဂလိပ်/English[obs] term for the Myanmar Era not affected by King Mohnyin’s modification in 1 AD which attempted to eliminate years from it [the term is obsolete as it is practically the seas သက္ကရာဇ်]
`သက္ကလတ်`(အသံထွက်) (/dha̱ ga̱ lá/)(ရင်းမြစ်) Per-sakallat common noun သက္ကလတ် Per-sakallat - သက္ကလတ်(n) သိုးမွေးနှင့်ရက်လုပ်သောအထည်တစ်မျိုး။#: သက္ကလတ်အင်္ကျီများကိုဆောင်းရာ
အင်္ဂလိပ်/Englishwoolen cloth; felt.
`သက္ကာယဒိဋ္ဌိ`(အသံထွက်) (/thé ka ja. deí hti./)(ရင်းမြစ်) Pali-သက္ကာယဒိဋ္ဌိ abstract noun သက္ကာယဒိဋ္ဌိ Pali-သက္ကာယဒိဋ္ဌိ(n) formal and literary# ရုပ်နာမ်အစုဖြစ်သောခန္ဓာကိုယောကျ်ား၊
အင်္ဂလိပ်/Englishillusion of self; false view of individuality.
`သက်`(အသံထွက်) (/thé/)(ရင်းမြစ်) common noun သက် သက်(n) တိဗက်မြန်မာအုပ်စုဝင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုပြောသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုး။ (ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောနှင့် ဘူးသီးတော
အင်္ဂလိပ်/English[of taste] slightly bitter.
Copyright © 2019. Myanmar Useful References CSR Project.